जापानमा हस्पिटल गएर कसरी कुरा गर्ने ? – NESAJ
जापानमा हस्पिटल गएर कसरी कुरा गर्ने ?
नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि होस् या अकस्मात विरामी परेका कारण होस् जापानमा हुनुहुन्छ र जापानी भाषा राम्रोसंग आउँदैन भने हस्पिटल जान कि त भाषा जान्ने कसैको सहयोग लिनुपर्छ कि त अंग्रेजी भाषा बोल्ने डाक्टर नै खोज्नुपर्छ । दुवै कुरा नभेटिए रोग सहेरै घरमै बस्न पनि बाध्य हुनुपर्छ । यो जापानमा बस्ने धेरै नेपालीहरुले भोगेको समस्या हो । त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर केही समय पहिले नै हामीले जापानी भाषा नजानेपनि हस्पिटलमा गएर कसरी उपचार गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी लेखेका थियौं जुन जानकारी यहाँ क्लिक गरि पढ्न सकिन्छ । आज भने बिरामी भएको बेला हस्पिटल जाँदा कसरी कुरा गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदैछौं । सर्बप्रथम बिरामी हस्पिटल वा क्लिनिकमा गएपछि रिसेप्सनमा हुने कुराकानीको नमूना हेरौं । बिरामी ‘क’ र रिसेप्सनिष्टलाई ‘ख’ मानौं ।
क. こんにちは。しんさつ を うけたいのですが。 (कोन्निचिवा, सिन्साचु ओ उकेताइ नोदेस्गा ।) – नमस्ते, म डाक्टरलाई भेट्न चाहान्छु ।
ख. こんにちは。どのようなしょうじょうですか？ (कोन्निचिवा, दोनोयोउना स्योउज्योउ देस्का?) – नमस्कार, लक्षण के–के हुन् ? यति कुरा भैसकेपछि अब तपाइले आफुलाई के भएको हो त्यो बताउनुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईलाई ज्वरो आएको छ र पेट पनि दुखेको छ भने :
क. ねつがあります。おなか もいたいです。 (नेचु गा आरिमास । ओनाका मो इताइ देस) – ज्वरो आएको छ, पेट पनि दुखेको छ ।
ख. ねつはなんどですか？ (नेचु वा नान्दो देस्का ?) – ज्वरो कति डिग्री आएको छ ?
क. ３８どあります。 (सान्ज्युहाचीदो आरिमास) – ३८ डिग्री आएको छ ।
ख. わかりました。ほけんしょうは ありますか？ (वाकारिमासिता, होकेन्स्योउ वा आरिमास्का ?) – ए बुझें, तपाईसंग विमा पत्र छ ? तपाइले आफुसंग भएको इन्स्योरेन्स कार्ड देखाउनुभएपछि, आवश्यक फारम भरेपछि एउटा टोकन पाउनुहुन्छ ।
ख. ありがとうございます。ばんごう で およびしますので おまちください。 (आरिगातोउगोजाइमास, बान्गोउ दे ओयोवी सिमास्नोदे ओमाचीकुदासाइ ) धन्यवाद, नम्बर आएपछि म तपाईलाई बोलाउँछु, कृपया केही समय पर्खनुहोस् । )
तपाईलाई तल दिइएका मध्येका लक्षणहरु पनि छन् भने बताउन पनि सक्नुहुन्छ जस्तै
★ 頭痛です。 (जुचुउ देस्) – मेरो टाउको दुखेको छ ।
★ 咳がでます。 (सेकी गा देमास् ) – मलाई खोकी लागेको छ ।
★ 下痢です。 (गेरी देस्) – मलाई पखाला लागेको छ ।
★ 便秘です。 (बेन्पी देस्) – मलाई कब्जियत भएको छ ।
★ 吐き気がします。 (हाकीके गा सिमास्) – मलाई वाकवाकी लागेको छ ।
★ めまいがします。 (मेमाइ गा सिमास्) – मलाई चक्कर लागेको छ ।
★ よく眠れません。 (योकु नेमुरेमासेन्) – म राम्रोसँग सुत्न सक्दिन ।
★ 今日は気分が悪いです。 (क्योउवा किबुन् गा वारुइ देस्) – म आज बिरामी छु ।
★ 早く医者を呼んでください。 (हायाकु इस्या वो योन्दे कुदासाइ ) – कृपया सकेसम्म चाँडै डाक्टरलाई बोलाई दिनुहोस् ।
त्यस्तै यि शव्दहरु पनि हस्पिटल वा क्लिनिकमा तपाइलाई काम लाग्नसक्छन् ।
★ 受付 – उकेचुके – रिसेप्शनिस्ट
★ 痛い – इताइ – दुख्छ ( शरिरको कुनै भाग दुखेको छ भने त्यहाँ औलाले देखाएर ここが痛いです–कोको गा इताइ देस् भन्न सकिन्छ )
★ 薬 – कुसुरी – औषधी
★ 痛み止め – इतामेदोमे – दुखाई कम गर्ने
★ 注射 – च्युशा – इन्जेक्सन
★ 風邪– खाजे – चिसो
★ 看護婦 –खान्गोफु – नर्श
★ 薬局– याक्योउ – फार्मेसी
★ 会計窓口 – खाइकेइ मादोगुची – भुक्तानी डेस्क
★ お大事に – ओदाइजिनी – कृपया आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् जापानको व्यस्त समय, कामको चाप, नियमित खानपानको अभाव,तथा व्यायामको अभावका कारण विभिन्न किसिमका रोग लाग्न सक्छन् । सकेसम्म नियमित स्वास्थ्य जाँच गराइरहनु उपयुक्त हुन्छ । भनाई नै छ, रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बेस् । जापानमा कसरी सस्तो उपचार गराउन सकिन्छ र इन्योरेन्स भनेको के हो भन्ने बारेमा जानकारी चाहानुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ । माथि उल्लेखित कुराहरु सामान्य हुन तर निकै काम लाग्छन् । अर्को पोष्टमा डाक्टरसंग हुने संवादका वारेमा लेख्नेछौं । यो जानकारी उपयोगी लागेमा सेयर गरेर आफ्ना आफन्त तथा साथीभाईहरुमाझ पुर्याइदिनुहोला न है ।
जापानी व्याकरण,उच्चारण , वाक्यांश , खान्जी र शबदको बारेमा अथवा केही सुझाव दिन चाहानुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज Nepali Jisyoमा इन्बक्स गर्नुहोला। हजुरहरुलाई जापानी भाषा अथवा जापानमा बिधार्थी जिवनको बारेमा बुझ्न परेमा njisyo@gmail.com मा मेल गर्नुहोला ।
जापान आउनुअघि गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने केहि कुराहरु
जापानी साथी कसरी बनाउने ? भेट्दा कसरी बोल्ने ?
जापानमा किनमेल गर्दा काम लाग्ने १० वाक्यांशहरू